Health – MM Crime
လေဖြတ်ရောဂါအတွက် အစွမ်းထက်တဲ့ အပ်လေးတစ်ချောင်း တရုတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်က အိမ်တိုင်းမှာ အပ်တစ်ချောင်းလောက်တော့ ဆောင်ထားသင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အပ်လေး တစ်ချောင်းကပဲ လေဖြတ်သွားတဲ့လူနာကို ထူးဆန်းစွာ ကုသပေးနိုင်လို့ပါ။ ရုတ်တရက် လေဖြတ်သွားတဲ့ လူနာကိုတွေ့ရင် ဒီနည်းလေးအတိုင်း ကယ်ဆယ်ပေးလို့ရတာမို့ သေချာဖတ်ရှုပြီး မှတ်သားထားကြပါနော်။ လူတစ်ယောက် ရုတ်တရက်လေဖြတ်သွားပြီဆိုရင် ဦးနှောက်သွေးကြောတွေ တဖြည်းဖြည်းပြန့်ကားသွားတတ်ပြီး အရေးပေါ်ကုသပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အောက်ပါနည်းလမ်းလေးတွေက လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကို ကယ်ဆယ် ပေးနိုင်ပါတယ်။ လေဖြတ်သွားတဲ့လူနာက ဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေပါစေ လုံးဝနေရာမရွှေ့ပေး ပါနဲ့။ သင်သူ့ကို နေရာရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင် ဦးနှောက်ထဲ သွေးယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပြီး ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်နိုင်ပါတယ်။ အိမ်မှာ အေးထိုးအပ်ရှိရင် ပိုကောင်း ပါတယ်။ လက်ချုပ်အပ်ဆိုရင်လည်း သုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်။ အပ်ကိုပိုးသတ်တဲ့အနေနဲ့ စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာ မီးကင်ပါ။ ထို့နောက် လူနာရဲ့ လက်ချောင်းထိပ်တွေကို အပ်နဲ့ ထိုးဖောက်ပါ။ ဒီလိုကုသရာမှာ […]
နွားနို့ပုံမှန်သောက်သူများ ရနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုး(၆)မျိုး
နွားနို့ပုံမှန်သောက်သူများ ရနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုး(၆)မျိုး နွားနုို့ကို မနက်တိုင်း ဖြည့်စွက်စာအဖြစ်၎င်း၊ ပင်မအစားအစာဖြစ်၎င်း သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ နွားနို့ပုံမှန် သောက်သူတွေမှာ ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးက (6)မျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒါလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1. နှလုံးရောဂါကို 20% အထိ လျှော့ချပေးနိုင်တယ် နွားနို့ပုံမှန်သောက်သူတွေမှာ နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းပါတယ်။ နှလုံးရောဂါသည်များအတွက်လည်း နွားနို့ပုံမှန်သောက်ပေးခြင်းကြောင့် နှလုံးကျန်းမာရေး ပြန်ကောင်းစေပါတယ်။ နွားနို့ပုံမှန်သောက်တဲ့ ဆီဒင်အမျိုးသား 45000 ဟာ အခြားသူများနဲ့ယှဉ်ရင် နှလုံးရောဂါ ကင်းစင်ခြင်း၊ ရောဂါအမျိုးမျိုးဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခံရခြင်းဟာ 35% ပိုများတယ်လို့ သိရပါတယ်။ 2. အရိုးကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းနွားနို့ 250 ml ဆန့်ဝင်တဲ့ ခွက်တစ်ခွက်မှာ ကယ်လ်စီယမ် 408-500 ထိ ပါပါတယ်။ အဲဒီ ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်ဟာ အရိုးအတွက် အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ ဓာတ်ဖြစ်ပြီး […]
လေဖြတ် ဝေဒနာ ခံစားနေရသူများသည် ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာခံစားရပါသည် ပြုစုရသော မိသားစု များမှာလဲ အင်းမတန်မှ ဒုက္ခရောက်ပါသည် သို့ဖြစ်ပါ၍ ဆေးဖော်နည်းလေးမျှဝေ လိုက်ပါသည်.
လေဖြတ် ဝေဒနာ ခံစားနေရသူများသည် ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာခံစားရပါသည် ပြုစုရသော မိသားစု များမှာလဲ အင်းမတန်မှ ဒုက္ခရောက်ပါသည် သို့ဖြစ်ပါ၍ ဆေးဖော်နည်းလေးမျှဝေ လိုက်ပါသည် ဆေးဖော် ရန်လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ၁ ! အုန်းသီးရင့်ရင့်တစ်လုံး ၂ ! ထနှောင်းခေါက် နှင့် ချက်သော တောအရက် ဦးရည် ၃ ! ဆေးဖော်နည်းမှာ အုန်းသီး၏ နတ်သမီးပေါက် အနားကို ဓားနှင့် ရှက်၍ နတ်သမီးပေါက်ကို ဖောက်ပြီး အုန်းရည်များ ထုတ်ပြစ်ရပါမည် ၎င်းနောက် အရက်ဦးရည်ကို အုန်းသီးထဲတွင် အပြည့် ထည့်၍ အပေါက်ကို သင့်တော်ရာဖြင့် လုံအောင်ပြန်ပိတ်ပါ ပိတ်ပြီးသောအုန်းသီးကို မြေကြီးကို တောင်ဝက်လောက်တူး၍ (၇)ရက် တိတိ မြုတ်ပါ (၇)ရက်ပြည့်လျှင် ပြန်ဖော်၍ အုန်းသီးထဲမှ အရက်များပြန်ထုတ်ပြီး […]
ဆီးချိုကျစေတဲ့အပြင် ကင်ဆာကိုတောင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ကင်းပုံသီးနဲ့ ကင်းပုံရွက်(တခြားရောဂါတွေကိုလည်း ပျောက်ကင်းသက်သာစေပါတယ်)အစွမ်းကတော့ အံ့မခမ်းပဲ
ဆီးချိုကျစေတဲ့အပြင် ကင်ဆာကိုတောင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ကင်းပုံသီးနဲ့ ကင်းပုံရွက်(တခြားရောဂါတွေကိုလည်း ပျောက်ကင်းသက်သာစေပါတယ်)အစွမ်းကတော့ အံ့မခမ်းပဲ ဈေးမှာလွယ်လွယ်ဝယ်လို့ရပြီး စားလို့ကောင်းတဲ့ ကင်းပုံသီးကို သိပ်စိမ်းကြမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ ကင်းပုံသီးကြော်က ထမင်းစားမြိန်စေတဲ့ အရံဟင်းလေးတစ်ခွက်ပါ။ ဟိုအရင်ကဆို ခြံစည်းရိုးတွေမှာ အလေ့ကျပေါက်တဲ့ နွယ်ပင်လေးတွေပေါ့။ ဒီလိုနွယ်တက်နေတဲ့ ကင်းပုံညွန့်လေးတွေကိုလည်း ပြုတ်တို့လို့ရ၊ ကြော်ချက် သို့မဟုတ် ဟင်းချိုချက်သောက်လို့ရတယ်ဆိုတာရော သိကြပါသလား။ အာရှနဲ့ အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာ စားသုံးလေ့ရှိတဲ့ အသီးနဲ့အရွက်ဖြစ်ပြီး ကင်းပုံပင်က ကိုယ်တွင်းဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုတိုးတက်စေတယ်၊ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုထိန်းညှိပေးတယ်၊ ဆီးချိုကာကွယ်တယ်၊ နှလုံးနဲ့ အာရုံကြောစနစ်အတွက်ကောင်းတယ် စသည်ဖြင့် ယုံကြည်ကြပါတယ်။ လေ့လာမှုတချို့အရဆို ကျောက်ကပ်ကျောက်တောင် ကြေစေနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဘယ်လိုဆေးဖက်ဝင်တာလဲ #သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးတယ် ရှေးခေတ်ဆေးပညာမှာ ကင်းပုံကို ဆီးချိုရောဂါကုသရာမှာ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ကင်းပုံပင်ရဲ့ ရိုးတံနဲ့အရွက်ကို ကြော်ချက်တာ ဒါမှမဟုတ် ဟင်းချိုခတ်သောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို နှစ်ကြိမ်လောက် စားပေးခြင်းအားဖြင့် ဆီးချိုအတက်အကျ […]
ဆင်တုပ်ကွေး (Chikungunya) ဆိုတာ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးထားလည်း ကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်(ဆင်တုပ်ကွေးအကြောင်း သိကောင်းစရာ)
ဆင်တုပ်ကွေး (Chikungunya) ဆိုတာ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးထားလည်း ကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်(ဆင်တုပ်ကွေးအကြောင်း သိကောင်းစရာ) မိုးရာသီဆို တုပ်ကွေးလေးတွေတန်းစီ လို့ပြောရမလိုပဲနော်။ တုပ်ကွေးမျိုးစုံဖြစ်ကြတဲ့အထဲမှာ ဆင်တုပ်ကွေး(ဆင်ဖြူတော်တုပ်ကွေးလို့လည်းခေါ်ကြတယ်) လို့သိကြတဲ့ Chikungunya ကလည်း ခုနောက်ပိုင်း နေရာဝင်ယူလာပါတယ်။ ခြင်တွေကလည်း ပေါလာတာကိုး။ Chikungunya ဟာ သွေးလွန်တုပ်ကွေးခြင်လို့သိကြတဲ့ Aedes aegyp ti နဲ့ Aedes albopictus ခြင်မျိုးစိတ်တွေကတဆင့် လူတွေဆီကူးစက်တာဖြစ်ပါတယ်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးနဲ့ ဆင်တူတဲ့ရောဂါလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လူလူချင်းမကူးနိုင်ပေမယ့် ဒီတုပ်ကွေးဖြစ်နေသူကို ကိုက်ခဲ့တဲ့ခြင်က နောက်တစ်ယောက်ဆီ ကူးစက်ပေးတာပါ။ ဆင်တုပ်ကွေးဖြစ်ရင် စစချင်းမှာ ကိုယ်ပူတာ၊ အဆစ်အမြစ်တွေကိုက်ခဲတာခံစားရတယ်၊ နောက်တော့ နုံးတာ၊ ကြွက်သားနာကျင်တာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ အရေပြားအနီကွက်ဖြစ်တာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါပိုးသယ်ဆောင်လာတဲ့ခြင်ကိုက်တာခံရပြီး ၂ ရက်ကနေ ၇ ရက်အတွင်း ဆင်တုပ်ကွေးရဲ့ လက္ခဏာတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေး မရှိ Chikungunya […]
အာပုပ်ဆော်နံတာ၊ သွားမှာကျောက်တည်တာနဲ့ သွားချိုး (ဂျိုး) တက်တာတွေကို ပျောက်ကင်းစေမယ့် သဘာဝသွားတိုက်ဆေး
အာပုပ်ဆော်နံတာ၊ သွားမှာကျောက်တည်တာနဲ့ သွားချိုး (ဂျိုး) တက်တာတွေကို ပျောက်ကင်းစေမယ့် သဘာဝသွားတိုက်ဆေး သွားနဲ့ခံတွင်းကျန်းမာရေးက သိပ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ စကားပြောဆိုဆက်သွယ်ရမှာ ခံတွင်းနံ့မဆိုးဖို့လိုသလို အပြုံးချင်းဖလှယ်ရာမှာ ယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီအတွက် ဘယ်လိုသွားတိုက်ဆေးတွေ ဝယ်ယူအသုံးပြုရမလဲလို့ တွေးနေပြီလား။ အဲဒီလို ကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်စရာမလိုဘဲ သဘာဝပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ သွားတိုက်ဆေးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်း အုန်းဆီသန့် စားပဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ ဇွန်း ပြုလုပ်နည်း ပါဝင်ပစ္စည်းနှစ်မျိုးလုံးကို သေချာရောမွှေလိုက်ပါ။ ပြီးရင်သွားတိုက်တံပေါ်တင်ပြီး သွားတိုက်ပေးပါ။ အဲဒီလိုတိုက်ရာမှာ လျှာကိုလည်း တိုက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကြောင့် သွားတွေကို ဖြူဖွေးစေမှာဖြစ်ပြီး သွားချိုး (ဂျိုး) တွေကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ အုန်းဆီမှာပါတဲ့ Antimicrobial အစွမ်းကြောင့် လျှာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို သေစေမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် အာပုပ်ဆော်နံ့တာကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ Credit:myfoodmyanmar.com
ခြင်ဆေးခွေမလို၊ အင်မတန် အစွမ်းထက်တဲ့ ခြင်မလာအောင် ကာကွယ်တဲ့ အိမ်တွင်း ဆေးနည်း
ခြင်ဆေးခွေမလို၊ အင်မတန် အစွမ်းထက်တဲ့ ခြင်မလာအောင် ကာကွယ်တဲ့ အိမ်တွင်း ဆေးနည်း ==================== ==================== ခြင်ဆေးခွေမလို၊ အင်မတန် အစွမ်းထက်တဲ့ ခြင်မလာအောင် ကာကွယ်တဲ့ အိမ်တွင်း ဆေးနည်း မင်္ဂလာပါ…ခြင်မလာအောင် ခြင်ကာကွယ်တဲ့ ဆေးနည်းကလေးပေးပါမယ်။ စပါးလင်အရွက် လေးညှင်းပွင့် သံပုရာသီး တို့ကို ရေမြုတ်အောင်ထည့်ပြီး ရေတဝက်ရောက်အောင် ပြုတ်ပေးပါ။(အဖုံးအုပ်ပြီးပြုတ်ပါ) စပါးလင်အရွက်ဖားဖားတစ်ပင်၊ လေးညှင်းပွင့်ဆယ်ပွင့်၊ သံပုရာသီး၃လုံးနှုန်းသည် ရေ(ရေသန့်ဗူးတဗူးခွဲ)ထည့်ပြုတ်ပြီးအရည်တစ်လီတာနီးနီးအကျန် (ရေသန့်ဗူးတဗူး မပြည့်တပြည့်) ရေတဝက်ကျန်က ပိုကောင်းပါသည်။ ပြုတ်ပြီးအဖတ်တွေကို ခြင်တွေပေါက်နိုင်တဲ့ ရေဝပ်နေတတ်သော၊ နေရာမှောင်နေတတ်သောနေရာတွေကို ထားလိုက်ပါ။ပြုတ်ပြီးအရည်များကို ခြင်ဆေးရေအဖြစ် ရေဖြန်းဗူးတွင် ထည့်ဖြန်းပါ။ တပတ်လောက်တော့ အထားခံပါသည်။ ရေရှည်အထားခံနည်း မသိပါ။ ပြုတ်ပြီးလျှင် အေးသွားပါက အရည်နှင့်အဖတ်များကို သီးခြားဖြစ်အောင်ထားပေးပါ။တောရှောက်ခါးသီးနှင့် လုပ်ပါက အနံ့ပိုကောင်းပါသည်။ မိမိအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အိမ်အပြင်ဖက်တွင် ရေမြောင်းနှင့်အမှိုက်များကို […]
`မသိသူ​ကျော်​သွားသိသူ​ဖော်​စား´ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ဟိုးတစ်​​လောကမန္တ​လေးကမိတ်​​ဆွေတစ်​​ယောက်​က​ပြောပါတယ်​။မြန်​မာပြည်​မှာ​ကျောက်​ကပ်​ပျက်​စီးကြတဲ့သူ​တွေတစ်​​နေ့ထက်​တစ်​​နေ့ပိုပိုများလာပါတယ်​တဲ့။ မန္တ​လေးတစ်​မြို့ထဲမှာတင်​​ကျောက်​ကပ်​ပျက်​စီးသူ​တွေအများကြီးပါပဲတဲ့။တစ်​ချို့ဆိုရင်​​ကျောက်​ကပ်​က၁၀%​လောက်​ပဲအလုပ်​လုပ်​​တော့တဲ့အတွက်​မကြာခဏ​ကျောက်​ကပ်​​ဆေး​နေရလို့ပိုက်​ဆံအရမ်းကုန်​ပါတယ်​တဲ့။ဒါ​ကြောင့်​သဘာဝနည်းနဲ့​ကျောက်​ကပ်​ပြန်​လည်​​ကောင်းမွန်​လာ​စေနိုင်​တဲ့နည်းလမ်းကိုအများပြည်​သူအကျိုးအတွက်​ရှာကြံပြီး​ဝေမျှ​ပေးပါလို့​တောင်းဆိုလာပါတယ်​။ တိုက်​တိုက်​ဆိုင်​ဆိုင်​ပါပဲ၊ကျွန်​​တော့်​အမျိုးသမီးနဲ့ပတ်​သက်​ပြီးတရုတ်​ဆရာဝန်​မကြီးတစ်​​ယောက်​နဲ့အဆက်​အသွယ်​ရခဲ့ပါတယ်​။သူဟာတရုတ်​ပြည်​မှာနာမည်​ကြီးစာရင်းဝင်​ဆရာဝန်​မကြီးတစ်​​ယောက်​ပါ။တရုတ်​ဆရာဝန်​​တွေကအ​နောက်​တိုင်း​ဆေးပညာကိုတရုတ်​ရိုးရာတိုင်းရင်း​ဆေးပညာနဲ့​ပေါင်းစပ်​ပြီးတရုတ်​ဘာသာစကားနဲ့သင်​ကြားခဲ့ရတဲ့အတွက်​ဘက်​စုံနှံ့စပ်​​အောင်​သိကြသူ​တွေဖြစ်​ပါတယ်​။မျက်​နှာကြည့်​လိုက်​ရင်​​သော်​၄င်း၊လက်​​ကောက်​ဝတ်​ကိုစမ်းလိုက်​ရင်​​သော်​၄င်းဘာဖြစ်​​နေတယ်​ဆိုတာကိုဒက်​ကနဲ​ပြောနိုင်​ပါတယ်​။ တရုတ်​ဆရာဝန်​မကြီးကို​ကျောက်​ကပ်​ပျက်​စီးမှုအ​ ကြောင်းကို​မေးမြန်းလိုက်​ပါတယ်​။​ကျောက်​ကပ်​ပျက်​စီး​နေကြရတာဟာကိုယ်​တွင်းအဆိပ်​​တွေမျိုးစုံ​ကြောင့်​ဖြစ်​ရတာဖြစ်​​ကြောင်း၊ဓာတု​ဗေဒ​ဆေး​တွေကို​ရေရှည်​​သုံးစွဲသူ​တွေ​ကျောက်​ကပ်​ပျက်​စီး​ကြောင်း၊သဘာဝမဟုတ်​တဲ့​ဆေး​တွေကိုသတိထားဖို့လို​ကြောင်း၊အဆိုးဆုံးက​တော့Capsule​တွေကိုပလပ်​စတစ်​ဖြင့်​ပြုလုပ်​ထားရင်​အရမ်းကိုဥပဒ်​ဖြစ်​တတ်​​ကြောင်း၊ဖြည့်​စွက်​​ဆေး​တွေကိုလည်းသဘာဝမဟုတ်​ရင်​မသုံးသင့်​​ကြောင်း၊ဖြည့်​စွက်​​ဆေးဆိုတိုင်းလည်းမိမိရဲ့ဇီဝကမ္မဖြစ်​စဉ်​နဲ့သဟဇတဖြစ်​ချင်​မှဖြစ်​တတ်​​ကြောင်း၊လူတိုင်းနဲ့တည့်​မှာမဟုတ်​​ကြောင်းစသည်ဖြင့်အများကြီး​​ပြောသွားပါတယ်​​ ဒီ​တော့​ကျောက်​ကပ်​ပျက်​စီးတဲ့သူ​တွေသဘာဝအတိုင်းပြန်​​ကောင်းရ​အောင်​ဘယ်​လိုလုပ်​ရမလဲဆရာမကြီးလို့​မေးလိုက်​ပါတယ်​။​ကျောက်​ကပ်​ပြန်​​ကောင်းဖို့အတွက်​တရုတ်​​တွေအားထားဆုံးက​တော့Chinese Yam ပြဲဖစ်​ပါတယ်​တဲ့။Chinese Yamမှာပါတဲ့အင်​ဇိုင်း​တွေက​ကျောက်​ကပ်​ကိုပြန်​လည်​တည်​​ဆောက်​​ပေးနိုင်​​ကြောင်း​များများစားစရာမလိုဘဲတစ်​​နေ့ကို၁လက်​မ​လောက်​စား​ပေးတာနဲ့​ကျောက်​ကပ်​ကတဖြည်းဖြည်းပြန်​​ကောင်း​လာနိုင်​​ကြောင်း၊​ကျောက်​ကပ်​ပျက်​စီး​နေသူ​တွေ​ရော​ကျောက်​ကပ်​ကိုကာကွယ်​ထားလိုသူ​တွေ​ရောစားသင့်​​ကြောင်းဆရာမကြီးက​ပြောပြပါတယ်​။ကျွန်​​တော်​တို့မြန်​မာပြည်​မှာမရှိဘူးဆရာမကြီးလို့ဆို​တော့တစ်​ကမ္ဘာလုံးမှာရှိပါတယ်​တဲ့။​ကျောက်​ကပ်​ပျက်​စီး​နေသူ​တွေဟာ​ရှောင့်​သင့်​တာ​တွေကို​ရှောင်​ပြီးchinese yam ကိုပုံမှန်​စားသွား​စေချင်​ပါတယ်​တဲ့။ အဲဒီလိုဆို​တော့Chinese Yam ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုလိုက်​ရှာရ​တော့တာ​ပေါ့ဗျာ။Google​တွေUtube​တွေမှာအသည်းအသန်​လိုက်​ရှာရပါ​တော့တယ်​။​တွေ့ပါပြီ၊​တွေ့ဖူး​နေတယ်​၊အ​တော်​ကိုရင်းနှီး​နေသလိုပဲ။Memoryပြန်​​ခေါ်ပြီးစဉ်းစားခန်းဝင်​လိုက်​​တော့ငယ်​ငယ်​ကကျိုက်​ထီးရိုးတက်​တုန်းကမြင်​ဖူးခဲ့တာကိုအမှတ်​ရတယ်​။အခု​နောက်​ပိုင်းမှာ​ခေတ်​စားတဲ့အကင်​ဆိုင်​​တွေမှာ​ရောင်းတာကိုသတိထားမိတယ်​။တရုတ်​​ဟော့​ပေါ့ဆိုင်​​တွေမှာလည်း​တွေ့မိတယ်​၊market place,city mart​တွေမှာလည်း​ရောင်းတာကိုမျက်​လုံးထြဲမင်​လာတယ်​။ဒါ​ကြောင့်​အနီးဆုံးcity mart ကို​ပြေးပြီးသွားရှာ​တော့​တွေ့ပြီးဝယ်​လာပါတယ်​။ Chinese Yam ကို​တွေ့ရခဲ့ပြီ။အလွန်​​ကောင်းတယ်​ဆိုတာကိုလည်းတရုတ်​ဆရာဝန်​မကြီး​ကျေးဇူး​ကြောင့့်​သိခဲ့ရပါပြီ။သို့​သော်​မြန်​မာပြည်​သူလူထုသိဖို့အတွက်​ကမြန်​မာအမည်​ဖြစ်​မှရမှာ​လေ။ဒါ​ကြောင့်​နည်း​မျိုးစုံနဲ့လိုက်​စုံစမ်းရ​တော့တာ​ပေါ့။မြန်​မာအမည်​က​တော့ကဒက်​ဥပါတဲ့။ရခိုင်​​တွေက​တော့သင်း​ဖောဥလို့​ခေါ်ကြပါတယ်​၊သင်းဒက်​ဥလို့လည်း​ခေါ်တယ်​လို့သိရပါတယ်​။​အချို့​ဒေသ​တွေမှာ​တေ့ာ​တော​မျောက်​ဥလို့လည်း​ခေါ်ပါတယ်​တဲ့။​တောကမိတ်​​ဆွေ​တွေကို​မေးကြည့်​​တော့တို့​တောမှာ​ပေါလွန်းလို့ကွာတဲ့။ပိန်းဥ​လိုပဲဟင်းချိုလုပ်​​သောက်​ကြတယ်​၊အာလူးလိုလည်း​ကြော်​စားကြတယ်​။တရုတ်​လူမျိုး​တွေက​တော့ဝက်​နံရိုးနဲ့စွပ်​ပြုတ်​လုပ်​​သောက်​ကြ​ကြောင်းသိရပါတယ်​။နဲနဲပြုတ်​လိုက်​တာနဲ့စားလို့ရပါပြီ။ အဲ့​လောက်​နဲ့ကျွန်​​တော်​ကမ​ကျေနပ်​​သေးဘူးဗျ။အင်​တာနက်​က​နေအ​သေးစိပ်​ထပ်​​လေ့လာပါတယ်​။အဲဒီမှာဘာသွား​တွေ့Chinese Yam ဟာ​ကျောက်​ကပ်​တစ်​ခုတည်းသာမကအဆုတ်​၊အစာအိမ်​၊သရက်​ရွက်​တို့ကိုလည်းပြန်​​ကောင်း​စေနိုင်​​ကြောင်းခန်းခန်းနားနား​ဖော်​ပြထားပါတယ်​။အဲဒီကလီစာ၎ခုအပြင်​အခြား​သောကလီစာ​တွေကိုလည်းသူ့မှာပါတဲ့အင်​ဇိုင်း​တွေဟိုမုန်း​တွေနဲ့ပံ့ပိုးသမှုပြု​ပေးပါ​သေးတယ်​။chinese Yam(ကဒက်​ဥ)ကတစ်​ပင်​လုံးတန်​ဖိုးရှိတာဖြစ်​ပြီး​အောက်​ပါအကျိုး​ကျေးဇူးများကိုရရှိမှာဖြစ်​​ကြောင်း​သေ​သေချာချာ​ပြောထားပါတယ်​။ ၁)Energy ကိုမြှင့်​တင်​​ပေးခြင်း ၂)ပင်​ပန်းနွမ်းနယ်​မှုကို​ပျောက်​​စေခြင်း ၃)ရင်​ကျပ်​ပန်းနာကိုသက်​သာ​စေခြင်း ၄)​ချောင်း​ခြောက်​ဆိုးခြင်းကို​ပျောက်​​စေခြင်း ၅)သံ​ကောင်​တုတ်​​ကောင်​များကိုဖယ်​ရှား​ပေးခြင်း ၆)ကိုယ်​အ​လေးချိန်​​လျှော့ချ​ပေးခြင်း ၇)ဝမ်းတွင်းအပူအပုပ်​များကိုဖယ်​ရှား​ပေးခြင်း ၈)ဆီး​ကောင်း​စေခြင်း ၉)အရိုးပွမှုကိုကာကွယ်​ခြင်း ၁၀)သိုင်းရွိုက်​ဟိုမုန်း​ရေချိန်​ညှိ​ပေးခြင်း ၁၁)​သွေးတွင်းသကြားဓာတ်​ကိုညှိ​ပေးခြင်း ၁၂)သည်း​ခြေ​ရောင်​ရမ်းမှုမဖြစ်​​အောင်​ကာကွယ်​ခြင်း ၁၃)အူကျန်းမာ​ရေးကို​စောင့်​​ရှောက်​ခြင်း ၁၄)အတွင်း​ကြေမှုများကိုပြန်​​ကောင်း​စေခြင်း ၁၅)ကင်​ဆာဆဲလ်​များကိုသတ်​​ပေးခြင်း ၁၆)စိတ်​ခံစားမှု၊မငြိမ်​သက်​မှုများကို​ကောင်း​စေခြင်း ၁၇)အစာ​ကြေ​စေခြင်း ၁၈)နာတာရှည်​ဝမ်း​လျောမှုကို​ပျောက်​​စေခြင်း ၁၉)​သွေးဆုံးကိုင်​ခြင်းကိုသက်​သာ​စေခြင်း ၂၀)အသရိုက်​တစ်​ကိုသက်​သာ​စေခြင်း ၂၁)ဇီဝကမ္မဖြစ်​စဉ်​ကိုထိန်း​ပေးခြင်း ၂၂)ဗိုက်​ကြွက်​သားလိပ်​တက်​ခြင်းကိုကာကွယ်​ခြင်း ၂၃)တစ်​သျူးအသစ်​များ​မွေး​ပေးခြင်း ၂၄)အဆစ်​အမျက်​နာကျင်​ကိုက်​ခဲမှုကိုသက်​သာ​စေခြင်း ၂၅)​ကော်​လက်​စ​တြော​ရေချိန်​ကိုညှိ​ပေးခြင်း ၂၆)အင်​တီ​အောက်​ဆိဒင့်​ကြွယ်​ဝခြင်း ၂၇)အရွက်​ရည်​က​မြွေကင်းအဆိပ်​ကိုပင်​​ဖြေ​ပေးနိုင်​ခြင်းစသည်​ဖြင့်​​ကောင်းကျိုးများစွာရရှိနိုင်​​ကြောင်း​ဖော်​ပြထားတာကို​တွေ့ရပါတယ်​။ […]
အရက်မသောက် ဆေးလိပ်မသောက် ကွမ်းမစားဘဲ ကျောက်ကပ်ထိလို့ ဆေးနေရတယ်ဆိုတော့ ဇစ်မြစ်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ…
အရက်မသောက် ဆေးလိပ်မသောက် ကွမ်းမစားဘဲ ကျောက်ကပ်ထိလို့ ဆေးနေရတယ်ဆိုတော့ ဇစ်မြစ်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ… အရက်မသောက် ဆေးလိပ်မသောက် ကွမ်းမစားသူတစ်ယောက်က ကျောက်ကပ်ထိလို့ ကျောက်ကပ်ဆေးနေရတယ်ဆိုတော့…ဇစ်မြစ်ကို လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ…အဖြေကတော့ဒီလူဟာ မုန့်ဟင်းခါးအလွန်ကြိုက်လို့ နေ့တိုင်းစားသူပါတဲ့မုန့်ဟင်းခါးမှာပါတဲ့ မုန့်ဖတ် မချဉ်အောင် မပုတ်မသိုးအောင်သုံးတဲ့ ဓါတုဆေးဝါးတွေကြောင့်ပါတဲ့။ မုန့်ဖတ်လုပ်တဲ့ဖို အားလုံးနီးပါးကလည်း မုန့်ဖတ်တွေ မပုတ်အောင် အတွက် လူသေတွေမပုတ်အောင်သုံးတဲ့ဖေါ်မလင်တွေ သုံးကြတယ်ဆိုတာ့့့ ကိုယ်တွေလည်း ကြားဖူးတာတော့ကြာပါပြီ….မုန့်ဖတ်ဖိုတွေရဲ့ လက်သုံးစကားက လူတကာ ကသုံးနေကြလို့ သူတို့လည်းမသုံးမဖြစ် သုံးလိုက်ရတာပါ။ ဒီကြားထဲ သစ်သီးသည်တွေက မှည့်ဆေးတွေသုံး..ပုဇွန်ခြောက်ငခြောက်က ဓါတုဆေးတွေဖြန်း….အစာအတု ဆေးအတု ရေသန့်အတု နဲ့ ဆိုးဆေးတွေ ဓါတုဆေးတွေကြားမှာ နေထိုင်ရှင်သန်နေကြရတဲ့ဘဝတွေထဲက….ကိုယ့်အလှည့် ဘယ်တော့ရောက်ပါ့မလဲတွေးရင်း ရင်မောနေရပါတယ်။ #Credit-ကျန်မာရေးနှင့်သတင်းများ
”အရိုးကျိုးအတွက် ၃ရက်ပဲကြာပါတယ်” (ရင်းနောင်းပင်) အရိုးကျိုးတဲ့လူ ၃ ရက်နဲ့လုံးဝ ပြန်ဆက်စေရမယ်။ မယုံရင်လာခဲ့ပါ ရိုက်ချိုးပြီးပြန်ဆက်ပြမယ်။ လမ်းဘေးဆေးပင်နဲ့ပဲဆက်ပေးမယ်။ အဲ့ဒါ မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးးးပဲ။ လျှို့ဝှက်ထားတဲ့နည်းကို ကူတို့ဆိပ်မှာ မှိုအိတ်ဖွင့်သလို လုပ်လိုက်တော့ တန်ဘိုးမဲ့တာပေါ့။ တန်ဘ်ိုးထားသူတွေအတွက်ပါ။ ဝေဒနာရှင်တွေအတွက်ပါ အသပြာဆရာတွေအတွက်မဟုတ်ပါ။ ပုံထဲကဆေးပင်ကို ထောင်းပြီး စည်းထားလိုက်ပါ မကိုက်ဘူး မနာဘူး တစ်ညတည်းဆက်တယ်(လက်တွေ့) ၃ရက်ဆိုတာက ပိူကောင်းအောင်ဆက်စည်းခိုင်းတာပါ။ ကျန်းမာကြပါစေ။ ၃ရက်ကြာလျှင် ပြန်ဖျက်ပါမည်။ Credit ကျော်လင်းအောင် ရင်းနှောင်းပင် ကို အထက်အညာ တချို့ဒေသတွေမှာ ဝက်ဖရုံပင် လို့လဲ ခေါ်ကြတယ်။